Zithini iiNofollow, Dofollow, UGC, okanye iiNkxaso eziXhasiweyo?
Yonke imihla ibhokisi yam engenayo igcwala ziinkampani ze-SEO zogaxekile abacela ukubeka amakhonkco kumxholo wam. Yimisinga yezicelo engapheliyo kwaye iyandicaphukisa. Nantsi indlela i-imeyile ehlala ihamba ngayo…
Ndiqaphele ukuba ubhale eli nqaku limangalisayo kwi [igama eliphambili]. Sibhale inqaku elineenkcukacha malunga noku. Ndicinga ukuba iya kwenza ukongeza okuhle kwinqaku lakho. Nceda undazise ukuba uyakwazi ukubhekisa inqaku lethu kwikhonkco.
Kuqala, bahlala bebhala inqaku ngokungathi bazama ukundinceda kunye nokuphucula umxholo wam xa ndisazi kakuhle ukuba bazama ukwenza ntoni ... beka backlink. Ngelixa iinjini zokukhangela zilungelelanisa ngokufanelekileyo amaphepha akho ngokusekwe kumxholo, loo maphepha aya kubekwa ngokwenani leziza ezifanelekileyo, ezikumgangatho ophezulu ezidibana nazo.
Yintoni ikhonkco elingenanto? Ngaba uyalandela ikhonkco?
A Ikhonkco elingenanto isetyenziswa ngaphakathi kwethegi ye-anchor HTML ukuxelela injini yokukhangela ukuba ingahoyi ikhonkco xa kufikwa ekudluliseni naliphi na igunya ngalo. Nantsi indlela ejongeka ngayo kwi-HTML eluhlaza:
Ngoku, njengoko injini yokukhangela irhubuluza ikhasa iphepha lam, isalathisa umxholo wam, kwaye imisela i-backlinks ukubonelela ngegunya kwimithombo yolwazi… iyayityeshela nof amakhonkco. Nangona kunjalo, ukuba bendidibanise kwiphepha lokuya ngaphakathi komxholo endiwubhalileyo, ezo tag ze-anchor azinalo uphawu lokulandela. Abo babiziwe Dofollow amakhonkco. Ngokuzenzekelayo, lonke ikhonkco lidlula kwigunya lokuma ngaphandle kokuba uphawu lwe-rel longeziwe, kunye nomgangatho wekhonkco omiselweyo.
Okubangela umdla ngokwaneleyo, amakhonkco alandelayo ahlala aboniswa kwiKhonkco lokuKhangela kuGoogle. Nasi isizathu:
Ke Dofollow Amakhonkco naphi na Ndincedisa ukubekwa kwam?
Xa kufunyenwe ukubanakho ukusebenzisa inqanaba ngokusebenzisa i-backlinking, ishishini leebhiliyoni zeedola laqala ngobusuku ukunceda abathengi ukuba banyuse amanqanaba abo. Iinkampani ze-SEO zizenzekelayo kwaye zakhiwe ngaphandle Qhagamshela iifama wanyathela irhasi ukuze asebenzise iinjini zokukhangela. Ewe uGoogle waqaphela… kwaye yonke loo nto yehla.
UGoogle uphucule ubuchule bayo bokubeka iliso kwinqanaba leendawo eziqokelele i-backlinks nazo ezifanelekileyo, imimandla enegunya. Ke, hayi… ukongeza amakhonkco naphina akunakunceda. Ukuqokelela i-backlink kwiindawo ezifanelekileyo kunye nezigunyazisiweyo kuya kukunceda. Ngokuchasene noko, ikhonkco lokugaxekile linokulimaza amandla akho okufumana inqanaba kuba ubukrelekrele bukaGoogle bunokwahlulahlulahlwaye kwaye bohlwaywe ngenxa yako.
Ngaba unxibelelwano ngokubhaliweyo okubhaliweyo?
Xa abantu bangenisa amanqaku kum, ndihlala ndibabona besebenzisa amagama aphambili abonakalayo kwisicatshulwa sabo se-anchor. Andikholelwa ngokwenene ukuba ii-algorithms zikaGoogle zilula ngokuhlekisayo kangangokuba isicatshulwa esikwiqhagamshelo lakho kuphela kwamagama aphambili abalulekileyo. Andizukumangaliswa ukuba uGoogle ahlalutye umxholo wokuqulatha ikhonkco. Andiqondi ukuba kufuneka ucace gca kumakhonkco akho. Nanini na xa ungathandabuzeki, ndincoma abathengi bam ukuba benze eyona ilungele umfundi. Kungenxa yoko le nto ndisebenzisa amaqhosha xa ndifuna abantu babone kwaye ucofe ikhonkco eliphumayo.
Kwaye ungalibali ukuba i-anchor tag inikezela zombini umbhalo kunye kunye isihloko kwikhonkco lakho. Izihloko luphawu lokufikeleleka ukunceda abafundi bekhusi bachaze ikhonkco kubasebenzisi babo. Nangona kunjalo, uninzi lwebrowser ziyazibonisa ngokunjalo. I-SEO gurus ayivumelani nokuba ukubeka isicatshulwa setayitile kunokunceda inqanaba lakho kumagama aphambili asetyenzisiweyo. Nokuba yeyiphi na indlela, ndicinga ukuba yinto elungileyo kwaye yongeza ipizazz encinci xa umntu ethe wagcoba ngaphezulu kwekhonkco lakho kunye nengcebiso.
Kuthekani Ngeekhonkco Ezixhasiweyo?
Nantsi enye i-imeyile endiyifumana mihla le. Ndiyaziphendula… ndibuza umntu ukuba bayandibuza ukuba ndibeka igama lam emngciphekweni, ndihlawuliswe ngurhulumente, kwaye ndilahlekiswe kwiinjini zokukhangela. Sisicelo esingenangqondo. Ke, ngamanye amaxesha ndiyaphendula ndibaxelele ukuba ndingavuya kuyo… iyakubabiza i $ 18,942,324.13 nge-backlink nganye. Ndisalinde umntu ozokufaka imali kule mali.
Ndiqaphele ukuba ubhale eli nqaku limangalisayo kwi [keyword]. Sithanda ukuhlawula ukuba ubeke ikhonkco kwinqaku lakho ukukhomba kwinqaku lethu [apha]. Yimalini ukuhlawula ikhonkco elingalandelwanga?
Kuyacaphukisa oku kuba kuyandicela ukuba ndenze izinto ezimbalwa:
Ukophula iMigaqo yeNkonzo kaGoogle -Bandicela ukuba ndifihle ikhonkco lam elihlawulelwayo kubarhwebi bakaGoogle:
Naluphi na amakhonkco enzelwe ukukhohlisa Iphepha lephepha okanye inqanaba lesiza kwiziphumo zophendlo zikaGoogle ezinokuthi zithathelwe ingqalelo njengenxalenye yesikimu sonxibelelwano kunye nolwaphulo lukaGoogle Izikhokelo zeWebhsayithi.
Izikimu zonxibelelwano zikaGoogle
Ukophula imigaqo yaseburhulumenteni -Bandicela ukuba ndophule izikhokelo ze-FTC kwizivumelwano.
Ukuba kukho unxibelelwano phakathi komxhasi kunye nomthengisi ukuba abathengi bebengayi kulindela kwaye kuya kuchaphazela indlela abathengi bavavanya ngayo ukuqinisekiswa, olo xhumo kufuneka luchazwe.
Isikhokelo sokuQinisekiswa kwe-FTC
Ukophula iThemba labafundi bam -Bandicela ukuba ndixoke kubaphulaphuli bam! Abaphulaphuli endibasebenzeleyo iminyaka eyi-15 ukwakha oku kulandelayo kunye nokufumana ukuthembela kubo. Akungaqondakali. Yiyo kanye le nto ungandibona ndityhila lonke ubudlelwane kuwo onke amanqaku- nokuba lilikhonkco lokudibana okanye umhlobo kwishishini.
UGoogle wayedla ngokubuza ukuba amakhonkco axhaswayo asebenzise i nof uphawu. Nangona kunjalo, ngoku bayilungisile loo nto kwaye banenqaku elitsha elixhasiweyo kwiikhonkco ezihlawulelweyo:
Phawula amakhonkco entengiso okanye ukubekwa okuhlawulelweyo (okubizwa ngokuba likhonkco elihlawulelweyo) ngexabiso elixhasiweyo.
Google, Qeqesha amakhonkco aphumayo
Ezi ziqhagamshelo zakhiwe ngolu hlobo lulandelayo:
Kutheni le nto abaBeki mva bangabhali nje iiNgxelo?
Xa i-PageRank yaxoxwa okokuqala kwaye iibhlog zafudukela kwindawo, ukuphawula kwakuqhelekile. Ayisiyiyo kuphela indawo ephambili yokuba nengxoxo (phambi koFacebook noTwitter), ikwadlula kwinqanaba xa ugcwalise iinkcukacha zakho zombhali kwaye ufake nekhonkco kumagqabaza akho. Uluvo logaxekile lwazalwa (kwaye iseyingxaki kule mihla). Akuzange kuthathe xesha lide ngaphambi kokuba iinkqubo zolawulo lomxholo kunye neenkqubo zokuphawula zifake amakhonkco angamaNofollow kwiprofayili zombhali kunye nezimvo.
UGoogle uqalile ukuxhasa uphawu olwahlukileyo koku, ugc. ugc sisichazi soMxholo oDalelwe ngumsebenzisi.
Unokusebenzisa indibaniselwano yeempawu. KwiWordPress, umzekelo, amagqabantshintshi ajongeka ngoluhlobo:
Ngaphandle lolunye uphawu abathi masikhe sazi ukuba ikhonkco liya kwi ngaphandle indawo.
Ngaba kufanelekile ukuba wenze i-Backlink Outreach ukuze ufumane iiKhonkco ezingaphezulu eziDibeneyo?
Le yinyani enkulu yokuxabana nam. Iimeyile zogaxekile endizibonisileyo ngasentla ziyacaphukisa kwaye andinako ukuzimela. Ndiyakholelwa ngokuqinileyo ukuba kufuneka njalo imali amakhonkco, ungaziceli. Umhlobo wam olungileyo uTom Brodbeck ubize ngokufanelekileyo oku ukudibanisa. Ndidibanisa amawakawaka eziza kunye namanqaku avela kwindawo yam… kuba bayifumene ikhonkco.
Oko kwathethi, andinangxaki ngeshishini elifikelela kum libuze ukuba bangabhala na inqaku lexabiso kubaphulaphuli bam. Kwaye, ayiqhelekanga ukuba kukho shushu unxibelelwano ngaphakathi kweli nqaku. Ndiwalahlile amanqaku amaninzi kuba abantu abangenisayo banikezela inqaku elothusayo elinomqolo ocacileyo ongasemva kuyo. Kodwa ndipapasha amanye amanqaku amnandi kwaye ikhonkco elisetyenziswe ngumbhali liya kuba nexabiso kubafundi bam.
Andenzi kufikelela… kwaye ndinamalunga nama-110,000 amakhonkco adibanisa kwakhona Martech Zone. Ndicinga ukuba bubungqina kumanqaku endiwavumelayo kule ndawo. Chitha ixesha lakho upapasha umxholo omangalisayo… kwaye i-backlinks iya kulandela.
tags: ukufikelela kwi-backlinkukuxhuma umvakukunikaamagqabantshintshi ngezimvoukudalulwashushuDofollow amakhonkcoikhomishini yorhwebo yomdibanisoftcikhonkco lokukhangela kuGoogleImigaqo yenkonzo kuGoogleGoogle +Ungeniso lokuqhagamshelaumgangatho wekhonkcoukwakha ikhonkconofAmakhonkco angenasipheloUhlobo lokukhangela eziphilayoamakhonkco ahlawulweyoamakhonkco omgangathobazalwanarel dofollowi-rel engenantoixhaswe ngemaliewe ugcabakhasayo kwiinjini yokukhangelaindawo yokukhangelaamakhonkco axhasiweyougcUgc amakhonkcoI-wordpress dofollowI-wordpress ayinanto
Yeyiphi Idilesi Yam ye-IP? Kwaye ungayikhuphi njani kuVavanyo lukaGoogle
Umyalelo weScratchpad: Eyona ndlela ikhawulezayo yokuFikelela kunye nokuHlaziya ukuThengisa kwiiVenkile zeWebhu
NgoJanuwari 21, 2007 ngo-1:35 PM
Enkosi ngokukhomba iplagi yeDofollow Doug. Ndandisazi ukuba i-WordPress yongeza i-rel = "nofollow" kwiikhonkco kwiinkcazo, kwaye ngokuqinisekileyo ndiyavumelana nengqiqo yakho ukuba nje ukuba izimvo zimodareyithwa, nawaphi na amakhonkco afanelekileyo ashiywe kwiinkcazo afanelwe yikhredithi yabo efanelekileyo.
NgoJanuwari 22, 2007 ngo-2:42 PM
Enkosi ngengcebiso; Ndisandula ukufaka iplagi (inkqubo engenabuhlungu kwaphela.)
Kudliwanondlebe i-spammer yamazwana yathi:
Ngaba inyathelo likaGoogle, iYahoo kunye ne-MSN, lokuwonga unxibelelwano “lokungalandeli” liza kumoyisa uSam kunye nebali lakhe? "Andiqondi ukuba iya kuba nefuthe elikhulu kwixesha elifutshane, eliphakathi okanye elide."
Udliwano-ndlebe olupheleleyo nalu:
NgoJanuwari 22, 2007 ngo-5:56 PM
Martin, inqaku elikhulu. Ndiyazibuza ukuba unzima kangakanani umsebenzi wakhe kulo nyaka uphelileyo!
Feb 24, 2007 ngo-6: 22 PM
Ngaba kukho indlela yokukhetha ukuba leliphi ikhonkco endifuna ukuba lilandelwe (wow, ulwakhiwo lolwimi olunomdla endilwenzileyo)? Isizathu kukuba xa ndibhekisela kwindawo ethile enobungozi enolwazi kuyo, ndingathanda ukuyikhuthaza kakhulu. Akunjalo njenge-censorship (ukuba ndibhekisela, ndithi, uluvo lwezopolitiko olwahluke kakhulu kunolwam, kodwa ukuba lusekwe kakuhle kwaye lubekwe kakuhle, andinangxaki yokuyikhuthaza), kodwa njengendlela yokulwa ne-entropy kunye nokumba phantsi. umxholo crappy.
Andinangxaki yokuhlela amakhonkco ngesandla. Ndihlala ndihlela amagqabantshintshi ukongeza amakhonkco e-Google Analytics aphumayo, izihloko zekhonkco kunye nokulungisa i-typography yeendwendwe, kodwa kuya kuba kuhle ukuyitshintsha ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile.
Feb 24, 2007 ngo-6: 52 PM
Ngokuqinisekileyo, theUg! Unokongeza i-rel=”nofollow” kuyo nayiphi na ikhonkco ongafuniyo ukuba uGoogle ayibeke kwindawo. Umzekelo:
Feb 24, 2007 ngo-7: 22 PM
Ewe, oko kunokuba lula kunokuzama ukuzicima. Ndigcina zonke izinto ezisoloko zisetyenziswa ngolo hlobo kumanqaku am eOpera? (iluncedo kakhulu ukuba namasuntswana, amaqhekeza, kunye neziqwengana zekhowudi ngaphakathi kwisikhangeli sakho ngamaxesha onke), ngoko ke yikopi-uncamathisele nje kum.
Feb 28, 2007 ngo-12: 55 AM
Ndiyifumene le. Kufuneka ube ujongiwe phambi kokuba uqhagamshelane nawe ngefomu yoqhagamshelwano.
Mar 26, 2007 ngo-5: 23 AM
Ndiyavuma Doug. Ukuba uya enkingeni yokufunda kunye nokumodareyitha inkcazo nganye (okufuneka ube yiyo) ngoko kuyavakala ukuvuza izimvo zokwenyani ngekhonkco elifanelekileyo.
Uya kufumana amagqabantshintshi "Eyona ndawo intle" njengesiphumo, kodwa ezo ziya ngqo kumgqomo wokuphinda usetyenziswe.
Abagaxekile abacacileyo banamagama afana ne "SEO ingcali" okanye "i-Web design Atlanta" okanye into engundoqo elayishiwe. Ezokwenyani zihlala zinamagama okwenene afana no “Lisa” okanye “uRobert”.
Mar 26, 2007 ngo 2:20 PM
Kulungile ukuba uye wathatha inyathelo kumbandela wokungalandeli. Nawaphi na amagqabantshintshi ngesiphumo? Ngaba uzifumene iziphumo ubuzifuna?
Mar 26, 2007 ngo 6:11 PM
Iziphumo aziyi kubaluleka kum njengoko ziya kufana nani bantu! Ukuphawula kwindawo yam kufuneka kuncedise kumanqanaba akho kaGoogle.
Epreli 27, 2007 ngo-4: 29 PM
Ndiqhuba iwebhusayithi yeDrupal-powered, ngoko ifakela ngaphandle kwe-rel=nofollow, kwaye kufuneka ufake iplagin ukongeza oku. Nangona ndisenza oku okwethutyana, kodwa ndaqonda ukuba ekuphela kwesizathu sokwenza oko kuluvo lwe-puerile lokuba izimvo endizishiyayo kwiindawo zabanye abantu azindiniki umgangatho wephepha, apho ndibanika umgangatho wephepha. Ndaqonda mandiyiyeke injalo.
Uninzi lwabantu luyamodareyitha izimvo zabo, kutheni ke bohlwaya abo bathatha ixesha lokushiya izimvo eziluncedo kwindawo?
Ndongeze umgaqo-nkqubo wokuphawula kwindawo yam ukuze ndingaziva ndibuhlungu malunga nokucima izimvo ezikwindawo engwevu.
Umzekelo, ukuba umntu ushiya uluvo oluthi "indawo entle", ndicebisa ukucima inkcazo, ngaphandle kokuba bashiye indawo ye-URL ingenanto. Ngaphandle komgaqo-nkqubo onjalo, ndaziva ndinyanzelekile ukuba ndijonge ikhonkco kwaye ndithathe isigqibo ngokusekelwe kwisayithi.
Meyi 21, 2007 kwi-11: 38 PM
Enkosi ngolwazi, ndingathanda ukwazi.
Abanye abantu bathi amaphepha asezakufumana izalathiso ngaphaya kwethegi yokungalandeli. yinyani le?
Meyi 22, 2007 kwi-6: 33 AM
Ewe, ayizizo zonke iinjini zokukhangela ezihlonipha ukungalandeli. Kwenzeka njalo ukuba uGoogle, eyinkwenkwe enkulu kwibhloko, nangona kunjalo. Andiqinisekanga ngeLive, Buza okanye iYahoo! Kungathatha ukugrumba ukuqonda.
Juni 20, 2007 ngo-5: 10 PM
Umsebenzi omhle – ndichasene kakhulu ne-nofollow.
Naliphi na ikhonkco kufuneka libalwe, okanye akufanele uvumele ikhonkco libekho. Ndiyazi ngabantu abongeza ngabom i-nofollow kwiikhonkco kwizithuba zabo ukuze bangabi netoni yamakhonkco aphumayo, ngethiyori yokuba iisayithi ezinxibelelanisa ngaphezu kokuba zidityaniswe ukuze zifumane iPR esezantsi.
Iyandicaphukisa into engapheliyo.
Hobo SEO eScotland
Juni 23, 2007 ngo-2: 04 PM
Senze okufanayo kwiblogi yethu yeendaba kungekho nto ngaphandle kweziphumo ezincumisayo malunga namagalelo omsebenzisi kunye nejusi ye-injini yokukhangela. 🙂
Jul 16, 2007 ngo-7: 34 AM
I-IMO rel=”nofollow” ayinamsebenzi kwaphela, ayizukubanqanda i-spam yokuphawula kuba abantu abasebenzisa ii-spammers basebenzisa isoftware. Isisombululo esona sisombululo sichasene ne-spammers yamazwana iiplagi ezifana ne-Akismet, Ukuziphatha okubi kunye ne-captchas okanye imibuzo yabantu.
Jul 22, 2007 ngo-3: 01 AM
ewe? ezo wiki?s ziziyatha!
uyazibuza ukuba kwenzeka ntoni ukuba sonke sisebenzisa i-nofollow kubo?
Jul 29, 2007 ngo-3: 30 AM
Molo, ndingathanda ukubuza ukuba ngaba i-WordPress, i-Yahoo 360, iBlogger, njl njl. sebenzisa "nofollow" kwizithuba zeblogi. okt Ukuba ndibhala iposti kwibhlog yam ndize ndifake ikhonkco kuyo, ngaba ikhonkco kwiposi yam iyatshintsha ibe rel=nofollow?
Aug 6, 2007 ngo-10:50 PM
Enkosi kakhulu ngenqaku elibalaseleyo malunga nophawu lokungalandeli. Kuba ifakwe njengento engagqibekanga kwi-WordPress, ndiyakrokrela ukuba uninzi lwabantu aluyazi nokuba lukhona.
Ndicinga ukuba umgaqo-nkqubo wokuvumela okanye ukungavumeli izimvo kumntu ngamnye kunokuba uzithobe phantsi zonke yeyona ndlela ingcono kakhulu.
Aug 15, 2007 ngo-3:00 PM
Enkosi ngesi sithuba! Ndiyazi ukuba ndilibele kade ekuyifumaneni, kodwa ndiqale nje ukubhloga kwaye ndizama ukufumanisa ukuba kutheni i-wordpress ye-heck ibeka i-nofollow kumakhonkco am. Ndiza kufaka i-dofollow enkosi ekufumaneni ibhlog yakho, mhlawumbi oko kuya kukhuthaza izimvo ezininzi kunye nokusebenzisana kwibhlog yam entsha.
Agasti 16, 2007 kwi-10: 22 AM
Andiqinisekanga ukuba inceda kangakanani ngokuthe ngqo ekuthatheni inxaxheba. Ndiyacinga, nangona kunjalo, ukuba 'iintaka zentsiba zibhabha kunye' ukuze ukwazi ukunxibelelana kunye nokuthatha inxaxheba kwezinye iiblogi ezingasebenzisi i-nofollow. Ekuhambeni kwexesha, ndicinga ukuba kukho inzuzo.
Ndiyayithanda nje kuba ndikholelwa ukuba uninzi lwempumelelo yam kwiblogi yenziwe ekuthatheni inxaxheba kwabantu abafana nawe kwincoko. Kutheni kufuneka ndifumane yonke inzuzo?!
Aug 26, 2007 ngo-6:58 PM
Enkosi ngolu lwazi Doug, bendisongeza ngesandla iithegi ze-rel kumakhonkco am kodwa andizange ndiyithathele ingqalelo le ndlela yokuphawula. Iyavakala nangona kunjalo, ndizakuqala ukwenza oku kuba sele ndimodareyitha izimvo zam ukuya kwinqanaba elikhulu.
Sep 10, 2007 kwi-8: 48 AM
Molo, ndifake iplagin yeDoFollow kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, kwaye ndifumene umbulelo kwezinye iiblogi ezincinci endizidibanise nazo kumanqaku am kunye nezimvo.
Inyathelo elikhulu nalo, kodwa KUPHELA ngokudityaniswa nezimvo ezingqongqo/ulawulo lwabasebenzisi, kungenjalo iibhlog ziya kuba yimithombo yespam ngokukhawuleza kunokuba sicinga.
Dec 13, 2007 ngo-8:31 PM
Doug, le nto ye-nofollow ibebuhlungu ngokwenene kubo bobabini iblogger kunye nomhlaziyi osemthethweni… ndinqwenela ukuba umntu enze iplagi ezakuvula/ikhubaze i-nofollow ngokwentando yomlawuli. zonke iiplagi ze-nofollo ndizisebenzisile ukukrazula ithegi ye-nofollow kuwo onke amagqabantshintshi kunye/okanye umhlalutyi. Njengoko uthe, abanye abantu bakhetha ukwamkela izimvo zabasebenzisi babo
Ngomhla wama-14 ku-Disemba 2007 ngo-3: 15 AM
Ndiyavuma, Jessie! I-WordPress ifumene loo ngxelo ngokuvakalayo kwaye icacile, kodwa ndicinga ukuba banokuba phantsi koxinzelelo kwiiNjini zoPhando ukuba bangenzi olo khetho.
Ngomhla wama-14 ku-Disemba 2007 ngo-5: 52 AM
Into ehlekisayo ye-doug kukuba uninzi lwabo "bathethelelayo" i-nofollow abanayo i-nofollow attribs kwiindawo zabo / iiblogi…. ayihlekisi na into yokuba abantu bathethe into baze benze enye? uye wandincoma ngokuba ne-dofollow apha njengakwibhlog yam… andiqinisekanga nje ukuba oku kuya kuyichaphazela njani i-PR yam kugoogle.
Feb 3, 2008 ngo-3: 42 AM
Enkosi ngokucacisa oku. Ndisandula ukuqalisa iwebhusayithi, kwaye ndijonge zonke iinketho zebhlog. Ngelishwa isoftware yebhlog enkonkxiweyo endinokuthi ndiyisebenzise kwindawo yam iyanuka emkhenkceni, kwaye bendicinga ukusebenzisa i-wordpress, ke ndiyabulela ngokuthetha ngokulandelayo okanye akukho mcimbi wokulandela. Ndineewebhusayithi ezi-2, enye engenazo i-google back links, kwaye ngolunye usuku indawo yam yesibini yabonisa i-backlinks ye-google ye-10 ngaphandle kwe-blue, kwaye ndandivuya ngokwenene! Ndithumela kwiiblogi ngamaxesha onke kwaye andizange ndiyazi ukuba unokufumana ikhonkco ngaloo ndlela, (duh, i-newbie!) Kwaye ngokukhawuleza ndine-10 izixhumanisi ezivela kwi-Dawud Miracle - ngubani na e-heck ???? Ndilandele ikhonkco elibuyela kwindawo yakhe kwaye ndaqonda ukuba yenye yeeblogi ezininzi endizithumele kuzo, enkosi uMmangaliso, YIMmangaliso !!! Emva koko ndazibuza ukuba yenzeke njani, kwaye kutheni ingazange yenzeke ngaphambili! Ke ngoku ndiyayifumana. Xa ndifumana isoftwe yam yeblogi phezulu ndiya kuba nokulandelayo ngokuqinisekileyo, hayi uhlobo olungalandeliyo. Kukho impumelelo eyaneleyo kuthi sonke....